::: IT-PAOH GROUP ::: မင်္ဂလာပါ။ ..... ::: IT-PAOH Group ::: >> it-paoh.blogspot.com မှ ကြိုဆိုပါဧ။် .... itwinmaung@gmail.com သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။........ အကြံပေးလိုသည်များ ရှိပါက pndomember@gmail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။.............. လာရောက်လည်ပတ်သူများ အထူးကျေးဇူးတင်လျက်ရှိပါသည်။
လေ့လာ၊ သင်ယူ၊ ဖလှယ်၊ (သတင်း၊ အားကစား၊ IT နည်းပညာ၊ ကဗျာ)
သာယာ လှပ တယ်ဆိုတာ သိအောင် လှမ်းခဲ့ပါ ရာသီမရွေးအမြဲစိမ်းလန်းနေဆဲပါ ..................................
သာယာ လှပတဲ့ ဒို့ရွာလေးကို လှမ်းခဲ့ကြပါ အမြဲစိမ်းလန်းနေတဲ့ (ထမ်းဆန်း) Near Tum Sang Cave ..................................
တချိန်တုန်းက IT-PAOH Team
ပန်ခမ်းရွာ မူးယစ်ဆေးဝါတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့တွင် IT-PAOH Team မှ ပါဝင်ခဲ့သည် ..................................
by: IT-PAOH ..................................
by : IT-PAOH .................................
by : IT-PAOH ..................................
အဝေးရောက် နေသောသူငယ်ချင်းများနှင့် အမှတ်တရ .......................
၂၀၁၂ ခုနှစ် အလည်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်ခဲ့ရတာ ရန်ကုန်မြို့
KHAM TAN (IT-PAOH) 12:04:00 PM | Computer , News
Live Show ငေါဝ်းသ,ချင်, ရွစ်ပြိုင်;ပွယ်
KHAM TAN (IT-PAOH) 5:43:00 PM | News
၀ါ;သနာ;စေ;တနာ; အွဉ်;အထျတဲင် ခွေသွဉ်း ခွန်ချဉ်;တန် အီပွိုင်ဆင်လွေဖေ; ”ထူ;ဂုဏ်;ရို;သေ; နီမွိုးဗွေ” Live Show ငေါဝ်းသ,ချင်, ရွစ်ပြိုင်;ပွယ်, ဝေင်.ဘန်ကောက် ကိုသွူသြ။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်;နီသွဉ်းသီး ပအိုဝ်;မူခိုဖုံ; လွူးနမ်းတွက်တာ; ဖထန်;လွေဗာ; ပအိုဝ်းခမ်း ယံဖေ;ကသေနန်းယူ;လာ.ချာ မွိုးဖါဂုဏ်ကေ.ဇူ.တဲင် နေတွမ်;ဂီတ အနုပညာတဗာ; ဖော်;ထန်;ဒင်;ပျ.ရို;သေ;လွေ.ဗာ; မွိုးဗွေ;သွူသြ။
၃ ။နင်.ရက်ပဲင်. ခေတ်တသာပအိုဝ်းမူ ရော့ခ်အဆိုတော်) သီးသွံဖြာ. အီ;ကျွလွဉ်ဖေ;အာ;ဒျာ; အကျောင်. လောဝ်းပွိာုန်လွေ.ဗာ; ပအိုဝ်း ခွန် နင် ထဲုင်ခမ်းသားသွူသြ။
နောဝ်.ထွူတကာ;တောဝ်း အဆိုတော်ထဲုင်ခမ်းဖုံးလဲ့ အီ;လွဉ်ကူ;ညီ;ရွစ်ပြိုင်လွေ.ဖေ; ငေါဝ်းသချင်.တဲင် ယံကျွလွဉ် ဖေ;အာ;ဒျာ;၀င်. အကျောင်. ရို;ရို;သေ;သေ; လောဝ်းပွိာုန်ဖစ်ပင်လွေ.ဗာ; ပအိုဝ်;မူ;ခို ထဲုင်ခမ်းစွုမ်;ဖြာ.သွူသြ။
၁။ ကတိုတက်လဲဉ်းဒျာ; နီပအိုဝ်;ဂီတအနုပညာ; ယံကတိုတက်ထဲင်းထဲင်း
၂။ ပအိုဝ်;မူခို ကလွေအောဝ်;ညာဗာ; ၀င်,ရပ်ရာ; ယံကသေနာ; ယူ;လချာ မွိုးဖါ ဂုဏ်;ကေဇူ.
၃။ နေတွမ်;ဂီတအနုပညာ; အာ;ရဲင်တဲင်ပွယ်ထွား ပရိတ်သတ်ဖုံ;ယံကထီ;သေ လလွဉ်အီဗာ; ပညာ;ရေ.၊ လူမူရေ၊ စီပွာရေ၊ ဥပဒေရေ၊ အုံအောာဝ်မူဗပာုသုတ အစစဖုံ; ဒဲဉ်သီလာဗွေ ၂၀၁၂ ငေါဝ်းသချင်ခွေတဲ့ အီ;စာလွေဖေ;ပွယ်ကိုသွူသြ။
ပွယ်မွူးနီ ————> ၁၁ ၊ ၈ ၊ ၂၀၁၂
တယ်စမွူးယာခို —–> ၁၂-၀၀ နားရီ; ဗလွေမွူးပာာ ၂၂-၀၀နားရီ:
ပွယ်ခင်လမ်း ——–> IEC တွိုက် အရန်း(၅) ဒဲဉ်သီလာဗွေ ၂၀၁၂ ခင်လမ်းလီ တဖူ၇မ်ခမ်ပဲာင် ဘန်ကပိ ဝေင်,ဘန်ကောက်
မိဉ်;မဲဉ်သေထဲင်းယင်း –> (+၆၆) ၀၈၁၆၅ ၄၈၇၉၇ – ခွန်လေး
KHAM TAN (IT-PAOH) 10:26:00 AM | Movie
IMTOO Photo to flash converter version1.10 ပါ
KHAM TAN (IT-PAOH) 10:15:00 AM | Computer
ဒါကတော့ ဓါတ်ပုံတွေကနေ flash အဖြစ် ပြောင်းပေးတဲ့ converter ပါပဲ. IMTOO ကတော့ ထုတ်လိုက်ရင် ကောင်းတာတွေချည်းပဲလို့ မဆိုလိုပေ မယ့်. တော်တော်များများဟာ တော်တော်ကောင်းကြပါတယ်. ကျွန်တော် converter ကို စသုံးဖြစ်တာလည်း IMTOO ကို သဘောကျရင်းကနေ စသုံးဖြစ် သွားတာပါ. တစ်ခြား converter တွေထက် IMTOO က ထုတ်တဲ့ converter တွေရဲ့ Tools တွေကို ပိုပြီး သဘောကျမိလို့ပါ. ကဲလိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သုံးကြည့်ပြီးပါပြီ တော်တော်လေးကို ကောင်းပါတယ်. လိုချင်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ထည့်ပြီး လိုချင်တဲ့ အသံဖိုင်တွေကိုပါ ဆွဲထည့်ရုံပါပဲ. လွယ်လွယ်လေးပါ. လက်နှေးရင်တော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲနော်. မြန်မြန်သာ Download လုပ်ထားလိုက်ပါ. ဆိုက်သေးသေးလေးပါ. တတ်နိုင်သလောက်တော့ တင်ပေးနေပါတယ်. ဖိုင်တွေကလည်း ဖျက်ပါတယ်. ကျွန်တော်က လည်း နိုင်သလောက် တင်ပါတယ်. သံသရာတော့ လည်နေတာပဲ. ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် tutorial movie တွေပါ ဖျက်ပစ်ပါ တယ်. တော်တော် စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်.
KHAM TAN (IT-PAOH) 10:13:00 AM | Computer
ခုဆိုက်ကို download လုပ်နေကြသူများကတော့ မသိပေမယ့် မကြာခဏဆိုသလို အမေးခံနေရပါတယ်. ဘယ်လို download လုပ်မလဲ ကိုညီနေမင်း။ software လဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ လျှောက်တင်ထားတယ်. Download လုပ်လို့လဲမရဘူး အဲ့လိုမျိုးပြောကြပါတယ်. တကယ်တော့ Download လုပ်မတတ်တာပါ။ လုပ်မရတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့တော့ ဘယ်လို Download လုပ်ရမလဲပြောပြပါ့မယ်.
မိမိ Download လုပ်ချင်တဲ့ software အောက်မှာရှိတဲ့ Ifile (သို့) Mediafire (သို့) Minus အဲ့ ဆိုက်သုံးခုကနေ ကြိုက်တဲ့ တစ်ခုကို နှိပ်လိုက်ပါ။ webpage တစ်ခုဆီကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီ့ Webpage ကို ရောက်ရင်5second စောင့်ပါ ။ SKIP ADD ဆိုတဲ့ အ၀ါရောင်နောက်ခံနဲ့ စာသားပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.
ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Download လုပ်ရမည့် နေရာကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်.
Account တစ်ခု မဖြစ်မနေ လုပ်ထားသင့်တဲ့ဆိုက်ပါ
KHAM TAN (IT-PAOH) 3:26:00 PM | Internet , News , Program
"ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကိုဇောင်း ပြောပြလိုက်တာပါ. ကိုညီနေမင်းက ဖိုင်အများကြီး တင်တဲ့သူဆိုတော့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်တဲ့" ကျွန်တော် တစ်ခု အကြံရမိပါတယ်. အဲ့အကြံဥာဏ်လေးကို အားလုံးကနေ လက်ခံမယ်၊ ကူညီချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် အတိုင်းထက် အလွန်ဝမ်းသာမိမှာပါ. အခုပြောတဲ့ဆိုက်လေးက ဖိုင်တင်ရတာ လွယ်ကူတဲ့အပြင် သူငယ်ချင်းတွေ များလာရင်လည်း ဖိုင်သိမ်းဖို့ space များလာပါလိမ့်မယ်. အဲ့ဒီ့တော့ မိမိရဲ့ဖိုင်တွေကို သိမ်းထားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားသူငယ်ချင်းတွေကို file share ပေးချင် လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင့်တစ်ခုတော့ မဖြစ်မနေ လုပ်ထားသင့်ပါတယ်. တစ်ကယ်လို့ ကျွန်တော့်ဆိုက်ထဲက တစ်ချို့ သေနေတဲ့၊ ကျွန်တော် မသိသေးတဲ့ link (Download လုပ်မရသော link ရှိပါက) အခုဖော်ပြတဲ့ ဆိုက်ကနေ အကောင့်လုပ်ပြီးတော့ Download link ကို ပေးပို့ ပေးနိုင်ပါတယ်. အဲ့ဒီ့ တင်ထားပေးတဲ့ link အတိုင်း ဆိုက်မှာ update အနေနဲ့ အစားထိုးပေးသွားမှာပါ. ပြီးတော့ software အသစ်တွေရှိလို့ ကျွန်တော့်ဆိုက်မှာ တင်ချင်တယ်၊ ပို့စ်အဖြစ် ရေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း မေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ်. ကျွန်တော့်ဆိုက်မှာ ၀င်ရေးလို့ရအောင် ကျွန်တော် စီစဉ်ပေးပါ့မယ်. ရေးသားသူနေရာမှာ ပို့စ်တင်တဲ့သူရဲ့ နာမည်ပဲ ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်. ရေးသားသူ ညီနေမင်းလို့ မပေါ်ပါဘူး. မိမိကိုယ်ပိုင်နာမည် ဒါမှမဟုတ် နာမည်ဝှက်တစ်ခု ပေးလဲပဲရပါတယ်. ဆိုက်ထဲမှာ ရေးသားမည့်သူသည် သူများဆိုက်ထဲမှ ကူးယူထားသည့် link များ မဖြစ်ရပါ. ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရေးသားထားသည့် စာများနှင့် ပုံများဖြစ်ရပါမည်။ လိုအပ်ပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပို့စ်အရေအတွက် များများနှင့် အကောင်းဆုံးတင်နိုင်သူအား. ၀ဘ်ဆိုက်တစ်ခု လက်ဆောင်အဖြစ် အခမဲ့ ဖန်တီးပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Linux, Mac, Window ကြိုက်တဲ့ O/S ကနေ ဖိုင်တင်ခြင်း Download လုပ်နိုင်ခြင်း။
ကျွန်တော်တို့ အသုံးများတဲ့ browser များဖြစ်တဲ့ Firefox နှင့် Google Chrome ဖြင့် ကောင်းမွန်လျှင်မြန်စွာ အလုပ်လုပ် ပေးနိုင်ခြင်း။
မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ MP3, MP4 နှင့် အခြား movie format များကို တင်နိုင်ခြင်း
လူအများမျှော်လင့်နေကြတဲ့ ဖုန်း software များဖြစ်ကြသော apk, .js, .sis နှင့် အခြားသော format များကို တင်နိုင်ခြင်း။
ပထမဦးဆုံး ဒီကို နှိပ်ပြီး website ကို အရင်သွားလိုက်ပါ။
ပြီးတာနှင့် အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ဆိုက်ကို ရောက်သွားတာနဲ့ sign up ကို နှိပ်ပြီး account အသစ်လုပ်ထားလိုက်ပြီးတော့ ဖိုင်တွေကို သိမ်းဆည်းလို့ရပါပြီ. ဖိုင်တွေကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်. သူငယ်ချင်းတွေကို ဖိတ်ခေါ်နိုင်ရင် ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေပါတယ်. ကျွန်တော် နောက်ပိုင်း အခုဆိုက်ကနေပဲ တင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်. အောက်မှာ ကျွန်တော် တင်ပြထားပါတယ်. လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားလိုက်ပါ.
ဖိုင်ကို တင်ပေးပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို share ပေးချင်ရင် direct download link ကိုပါ ပေးလို့ရပါတယ်.
မကြည့်စေချင်တဲ့ဆိုက်တွေ ပိတ်ဖို့ Anti-Porn 17.6.3.6
KHAM TAN (IT-PAOH) 3:18:00 PM | Internet , News , Program
နတ်ဆိုး . မိမိ မကြည့်စေချင်တဲ့ ဆိုက်တွေကို ဘယ်လို ပိတ်ထားရမလဲ ကိုညီ ကူညီပါဦးဗျာ. ကျွန်တော့်မှာ အမတွေရှိတော့ အဆင်မပြေလို့ပါ.
တင်ပေးလိုက်ပါပြီ ညီလေး အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. Minus ကနေဆိုရင်တော့ နှိပ်လိုက်တာနဲ့ တန်းပြီး Download link ကျလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ifile ကနေ ဆိုရင်တော့ စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်. ကြိုက်ရာကို ရွေးပြီး Download လုပ်ထားသင့်ပါတယ်. ကျွန်တော် ဖိုင်တွေကို ယခုထက်ပိုပြီးတော့ သိမ်းဆည်းထားစေချင်လျှင်၊ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော် ဖိုင်တွေ သိမ်းဆည်းဖို့ အခု 1GB ပဲ ရသေးပါတယ်. ကျွန်တော် invite လုပ်ထားတဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်ရဲ့ invite link ကို နှိပ်ပြီး account လုပ်တဲ့သူ များလာမှသာလျှင် ကျွန်တော် သိမ်းဆည်းနိုင်မည့် space များပြားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်. အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ အားလုံးပဲ ဖိုင်တွေကို Download link တွေ ကြာရှည်ခံနိုင်အောင် http://min.us/rhFSgdv ကို နှိပ်ပြီး account လုပ်ထားပေးပါ. ဒါမှမဟုတ်ရင် ဆိုက်ရဲ့ညာဖက်ခြမ်းက minus ပုံကို နှိပ်ပြီးတော့ account တစ်ယောက်ကို တစ်ခုစီပဲ လုပ်ထားရင်တောင် ကျွန်တော် ဖိုင်တွေ သိမ်းဆည်းနိုင်ဖို့ space တွေ များလာမှာပါ. ဒီဆိုက်ဟာ Direct download link ကို ပါ ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေအောင် account လုပ်ခိုင်းတာပါ. ကျွန်တော့် အတွက်တင်လည်း မဟုတ်ပါဘူး. အကောင့်လုပ်ထားတဲ့ သူတွေ မည်သူမဆို အခုလိုမျိုး invite လုပ်လိုက်တာနဲ့ တဖြည်းဖြည်းချင်း သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ space တွေ များလာမှာပါ. ပြီးတော့ ကျွန်တော် ပြောသလိုပါပဲ. ဖိုင်တွေတင် သိမ်းဆည်းနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး. format တော်တော်များများကို သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်. format ဆိုတာကတော့ .mp4, .rar, .001, .exe အစရှိသည်ဖြင့် "." ရဲ့ နောက်မှာ ဆုံးတဲ့ အမည်တွေကို format လို့ ခေါ်ဆိုတာပါ. format တွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူကြပါဘူး. ဘယ် program တွေကိုပဲ သုံးသုံး သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် format နဲ့ ဖိုင်တစ်ခုတော့ ရလာမှာပါ. ဥပမာ adobe pagemaker နဲ့သိမ်းရင် .pmd format နဲ့ ရလာသလိုမျိုးပေါ့. အားလုံးပဲ အဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . ifile နှင့် mediafire ကတော့ ဒီပုံစံအတိုင်းဆို ကြာရှည်ခံဖို့ သိပ်မလွယ်တော့လို့ အခုလို စီစဉ်လိုက်တာပါ. တောင်းဆိုထားတာ အရမ်းများပါတယ်. တစ်ချို့ program တွေဆိုရင် 2GB လောက်တောင် ရှိပါတယ်. guitar pro ကို program နဲ့ keygen သာ တင်ပေးလိုက်တာ. သူနဲ့ တွဲသုံးရမယ့် ဖိုင် မတင်ပေးနိုင်ပါဘူး. ဘာလို့လဲဆိုတော့ 1GB ကျော်နေလို့ပါ. အခု ဒီ minus ဆိုက်မှာလဲ 1GB ပဲ ရတဲ့အတွက် တင်ပေးတဲ့ဖိုင် 1GB ပြည့်တာနဲ့ အကောင့်အသစ်လုပ်ရင် လုပ်မလုပ်ရင် ထပ်တင်ဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး. .
Desktop Camstudio Software
KHAM TAN (IT-PAOH) 3:53:00 PM | Computer , Learns , News
K-Star ရဲ့ “နီးချင်ပြီ”
KHAM TAN (IT-PAOH) 3:40:00 PM | News , သီချင်း
K-Star အဖွဲ့ရဲ့ နီးချင်ပြီ အမည်ရတဲ့ ဗမာသီချင်းခွေ တစ်ခွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်ရောက် ပအိုဝ်းလူငယ်များ ပါဝင်သီဆိုထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပါဝင်သီဆိုကြတဲ့ အဆိုတော်တွေကတော့ (K-မင်းသစ်၊ K-စိုးလေး၊ K-၀င်းနိုင်ထွန်း၊ K-သားငယ်နဲ့ နန်းမိုးမိုးစံ)တို့မှ ပါဝင်သီဆိုထားပြီးတော့ ရတနာမြိုင် တေးသံသွင်းကနေ တစ်ဆင့်ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချီလိုက်ပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ပအိုဝ်းလူမျိုး လူငယ်တွေ ပါဝင်သီဆိုထားတဲ့အတွက် အားလုံး ၀ိုင်းဝန်း အားပေးစေချင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ၀ယ်ယူအားပေးဖို့ ပြည်တွင်းမှာရော၊ ပြည်ပရောက် ပအိုဝ်းညီအစ်ကိုများကို တိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တတွေ သူတို့တွေရဲ့ ပရိတ်သတ်အနေနဲ့ အဲဒီလို ၀ယ်ယူအားပေးနေမှ အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေလို့ ပြောလို့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပအိုဝ်းလူမျိုး အနုပညာရှင်တွေရဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်ပြီး အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် ပအိုဝ်းလူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ပြောပြချက်အရ.. စင်္ကာပူကို အခွေ(၃၀)ပို့တာ တစ်ရက်တည်းနဲ့ ကုန်လုနီးပါး အရောင်းသွက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စင်္ကာပူရောက် ပအိုဝ်းညီအစ်ကိုများ အနေနဲ့ ၀ယ်ယူအားပေးရန်အတွက် (ခွန်တမောင်; – +65 9614 6074)သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း ၀ယ်ယူရရှိနိုင်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ၀ယ်ယူရန်အတွက် ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း ညီလေးတစ်ယောက်ထံမှ ကြားသိရပါတယ်။ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူရန် +66816586333 ဆက်သွယ်ပါ… ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့။
ကဲဗျာ ပြည်တွင်းက ညီအစ်ကိုများ အပြေးအလွှားသာ အားပေးကြပေတော့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ Pa-Oh MP3 မှာတော့ အခွေတွေရောင်းပြီးလို့ အချိန်အတော် ကြာကြာမှာမှ တင်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ အခုတင်လိုက်ရင် အခွေမူပိုင်ရှင်များကို မငဲ့ညှာရာရာက်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါဗျာ။ ဒီသီချင်းခွေကို တောင်းဆိုနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ၀ယ်ယူအားပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာ။ သို့မဟုတ် အချိန်ကာလ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ စောင့်မျှော်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အမြည်းအစမ်းအနေနဲ့တော့ တစ်ပုဒ် နှစ်ပုဒ်တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။
VCD Version အမြည်းကိုတော့ (YouTubeChannel) မှာတင်ထားပေးပါတယ်။
(၁) နီးချင်ပြီ – K-မင်းသစ်
(၂) ဝေးရတော့မယ် – နန်းမိုးမိုးစံ
from: PA-OH MP3
ဒို့ ရဲ့အနေဝေးနေ့ တွေကိုပေါ့.........။။
မျှော်လင့် ယုံကြည်မှုနဲ့ ပဲ
ရင်ဘတ်နဲ့ခတ်နေ မိတယ်...။။
မင်း.... ရယ်သံလေးများကြားရမလား နားစွင့်.........သူ့ သီချင်းလေးတွေကတော့
မဝေးတော့တဲ့တစ်နေ့ ပြန် လည်
ဆုံတွေ့ချင်တယ် ချစ် သူရယ်...........။။။
ကောင်မလေးရေ မမေ့ခဲ့ပါဘူး ရွေးချယ်ခွင့်မရှိခဲ့တဲ့..ငါ့ဘ၀မှာ အရာရာကိုထိတ်လန့်နေခဲ့ရတယ် မင်း..ဘယ်တော့များ... ငါ့ရင်ထဲကို ထွ...
ကဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ အကောင့်နဲ့ ဖိုင်တွေအားလုံးကိုတော့ Mediafire ဆိုက်ကကော ifile.it ကလည်းပဲ domain name ပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် (ifile.it to ...
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် (Myanmar English Dictionary)
Crystalrays.org မှာတွေ့လို့ မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အပိုင်း (၁) နဲ့ အပိုင်း (၂) ဆိုပြီး ခွဲထားပါတယ်။ ဒေါင်းလော့ယူမယ်ဆ...
The Lady - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း ဇာတ်ကားကို နိုင်ငံတကာမှာ ရုံတင်ပြသပြီးပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယခုအချိန်ထိ ပြခြင်းမရှိသေးတဲ...
၀ါ;သနာ;စေ;တနာ; အွဉ်;အထျတဲင် ခွေသွဉ်း ခွန်ချဉ်;တန် အီပွိုင်ဆင်လွေဖေ; ”ထူ;ဂုဏ်;ရို;သေ; နီမွိုးဗွေ” Live Show ငေါဝ်းသ,ချင်, ရွစ်ပြိုင်...
Computer (25) Internet (2) Learns (10) Movie (1) News (18) Program (2) Windows (1) ကဗျာ (4) သီချင်း (1) အထွေထွေ (2)
Forex Trading Platform | Counter | Platinumplaycasino | Online Casino Usa | party casino
==== နောင်တောင်း ပရဟိတကျောင်း
==== Pa-Oh Magazine
==== Official Manchester United
==== မိသားစု အနုပညာအိမ်
==== အရုဏ်သစ် စာစောင်
==== နည်းပညာ မှတ်တမ်း
==== Myanmar Blog Directory
==== KP-3 နည်းပညာ
==== KMT ရဲ့စုစည်းမှုမှတ်တမ်း
==== မိုးထက်မြင့် (နည်းပညာ)
==== PA-OH MP3
==== စိုင်းနက္ခ (နည်းပညာ)
==== နောင်းခမ်း ပရဟိတ
==== နိုင်းနိုင်း စနေ
==== ညီနေမင်း (နည်းပညာ)
... အမေ ...
“ ချစ်သော မေမေ ” သို့ ...
...ကဗျာ ...ကဗျာ ...
လွမ်းလို့သေတဲ့ သစ်ပင်မရှိပါဘူးကွာ မင်းမရှိလို့ မသင်းပျံနိုင်တဲ့ ပန်းတပွင့်အတွက် ငါ့ရဲ့မိုးရာသီဟာ နောက်ကျနေခဲ့ပါပြီ။ သက်ပြင်းတွေခဏခဏ ချတာတောင် အာရုံမတတ်နိုင်တဲ့ ညအတွက်တော့ ခေါက်ရိုးကြိုးအတွေးနဲ့ ဆင်ခြေတွေဘဲရရလာတယ် လပြည့်ကျော်တဲ့ ည အတွက် အချစ်ကခါး အရက်ကတော့ ချို နေတုန်းဘဲ။ ။
KHAM TAN (IT-PAOH Team). Powered by Blogger.
Start မှ Run ။ ပြီးရင် cmd ကို ရိုက်ဖွင့်ပါ။
cmd box ပေါ်လာလျှင် cd\_ ကို ရိုက်ပြီး enter ခေါက်ပါ။
attrib -r -h -s autorun.inf ကို ရိုက်ပြီး enter ခေါက်ပါ။
del autorun.inf ကို ရိုက်ပြီး enter ခေါက်ပါ။ Yes or No မေးခွန်းတွင် Y ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးလျှင် d: ကို ရိုက်၍ enter ခေါက်ပါ။ ပြီးလျှင် အဆင့်(၃)နှင့် (၄)တွင် လုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း ပြန်လုပ်ပါ။
(အကယ်၍ Local Disk သည် (C:) (D:) (E:) တို့ ရှိခဲ့လျှင် အထက်က ပြသည့်နည်းအတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။ d: နေရာတွင် e: ကို ပြုလုပ်သွားရမည် ဖြစ်သည်။)
18 - March - 2012
Copyright 2011-2012 ::: IT-PAOH GROUP :::. Design By IT-PAOH and Premiumb Templates